Imisebenzi umbhali American Nicholas Sparks angababaza kufanele ukugqamisa uhlu amanoveli romantic, futhi igama lakhe usuphenduke into efanayo. Nokho akukho muntu omunye angase angakuzwa njengabanye ukuthi ubuhlobo, ukuthi wakwenza kanjani - ngokuningiliziwe, ucabanga ngakho, iqiniso. Ezincwadini zakhe, eziningi abayinakanga izinkinga yokuzikhethela futhi isiphetho sabo womuntu. Esimweni ngasinye kulezi zinhlamvu sibhekene nobunzima, ngokuvamile ukunquma indlela ikusasa le nhlekelele, kodwa ekugcineni uzothola uthando emfanele.
Okwamanje, kusukela ngothi Sparks waphuma izingcezu-20. Bonke kweso babe athengisa kakhulu. It uqhosha yokuthi ingxenye yabo sezivele wathwebula.
"I-Notebook" iminyaka eminingi umholi uhlu imisebenzi engcono somlobi. Kususelwa indaba izihlobo Sparks kweqiniso, le noveli khona ethengwa kakhulu osheshayo.
Abafundi bajwayelane umsebenzi Sparks, ngokuthi "The Notebook," yakudala love story. Futhi ngazwi linye okuphindaphindiwe lithathelwe esiyisibopho ke. Umsebenzi wasekuqaleni ubonakele emashalofini ngo-Okthoba 1996, futhi okukhiphayo of the gama elifanayo by yokudweba iminyaka kuphela kamuva iphutha. Cishe ngokuphazima kweso, studio Umugqa Omusha wathenga amalungelo, kodwa ukukhiqizwa yephuza kweminyaka embalwa. Jim Sheridan wakhethwa umqondisi. isithombe Female Kwakuhlelwe ukunikeza Eshli Dzhadd, futhi izindima abesilisa abathandi ezimbili Allie Hamilton alwa Mett Deymon futhi Robert Duvall.
Kulesi sigaba sokulungiselela akuzange wathola uxhaso oludingekayo, ngisho balithanda Steven Spielberg, kodwa ukukhiqizwa lihlehliselwe futhi. Ngo-2002, i-New Line Cinema oluqalisa uzame Nick Cassavetes esihlalweni umqondisi sika, kwaba ngaphezu yimpumelelo.
Presentiment okuphumelela, studio kuvuthwa kahle, uzama ukuthola indawo ukuqopha nokuhlela eliphonswayo esikhulu "The Notebook." Abalingisi obubusa ezinhlwini kwaba Dzhastin Timberleyk, iya okuku eside. Kodwa abakhiqizi phambili besilisa akhethiwe Ryan abasha Gosling. Reychel Makadams uthola ilungelo aguqule zibe Ally, noJakobe Marsden - ukudlala nesoka lakhe Lon Hammond. Manje musa skimp on ngezimali we studio inike $ 29 million 25 - ngaphezu ukumaketha.
Ukuqopha kuzoqala isimo Carolina, lapho isenzo senzeka khona esiqeshini ngo-November 2002. Iphethini ukukhululwa idluliswe kabili. Abadali futhi abadlali of the film "I-Notebook" ukulindela impumelelo. Phela, lokhu wesithathu ifilimu lithathelwe Sparks, ngemva "Umyalezo in a Bottle" futhi "Ukuhamba ukuze Khumbula." "I-Notebook" yakhululwa iqashwe Meyi 20, 2004. Impumelelo ifilimu abanalutho ukwengeza - ukuqashelwa kwezenhlalo, isibukeli uthando, izimali zomhlaba kudlulwe isabelomali ngu izikhathi 2, futhi eziningi imiklomelo, kuhlanganise "Kiss Kuhle".
Ekhaya elithile lasebekhulile indoda esikhulile ofunda amarekhodi kusukela ubudala wesifazane notebook. Ehlaselwa isifo i-Alzheimer, yena wayengazi lutho mayelana namaqhawe kwendaba, kodwa njalo ebusuku ngesithakazelo ulalela indaba yabo. Ukusebenza esigayweni, uNowa lapho uqala nje ukubona owayo uthandana Alice enhle. Ndawonye bachitha ehlobo olulodwa, kodwa khumbula ke kuze kube phakade.
umehluko Social ebangela ukuba ziyaphikisana. Ukwahlukana uqeda seMpi yoMhlaba yesiBili. Lapho ebuya ekhaya, uNowa luhlala indlu endala, okwase kuyisikhathi eside ngiphupha, futhi Ellie ethatha isosha Lon. Ukubona isithombe ngoNovemba ephephandabeni bangaphambi komshado, intombazane odlula ezindaweni ajwayelekile, ukunquma isiphetho ...
"I-Notebook." Abalingisi kanye izindima
Njengani angalindela - ngama-movie I-esekhokha bessmetnoe inani abalandeli. Love indaba uNowa Allie bayahlonishwa izigidi njengoba ithalente Nicholas Sparks. Akumangalisi a lot of abalandeli unesithakazelo ukuthi ungadala kanjani "The Notebook." Abalingisi, ngomzuzwana ayedumile babe nocezu esihlwabusayo izilaleli.
Njengoba ayezalelwe Canada, Ryan Gosling, usakhula Baqala ukwenza kumafilimu. Izinyathelo zakhe bokuqala lubonakale, kodwa ngokushesha emenywa ukuba indima enkulu -. ezihlukahlukene uhlobo mdwebo "The Believer," "Ukubulala ngu Izinombolo" futhi "I-United States of Leland" kuholele "I-Notebook" Lapho efika indima noNowa, umlingisi engu-23. Ryan ukulingana kahle ngaphansi uhlobo - isisebenzi elula kanzima, ziyahlanya othandweni futhi ngendlela emangalisayo abanesibindi ukuze enze isenzo sokungabi intombazane zakho ozithandayo.
Ekuqaleni waseCanada, kodwa ngeminyaka emibili uzakwabo, Reychel Makadams wathola ukwazisa emva ahlekisayo intsha "The Hot Chick" futhi "Mean Girls." Lezi zithombe wajabula kakhulu nezethameli ukuthi abakhiqizi baye bancika a ethembisa nascent udumo umdlali waseshashalazini. It excellently abhekana ngayo indima kancane Ellie ome njengeqanda.
Nikela ukuze uyothuthukisa umsebenzi abadlali wasiza impumelelo enkulu movie "The Notebook." Abalingisi, izithombe kuhlobisa izembozo zomagazini abaningi, wakhuluma ngokumthokozisa njengokomsebenzi wakhe kanye nokuhlawuliswa izinhlamvu ebekiwe kudlalwa izinhlamvu zabo. Umhlaba Iqiniso ukwazisa ngokusebenzisa "I-Notebook" bavunyelwe Ryan Gosling futhi Reychel Makadams ukuba ibe ngomunye izinkanyezi yimpumelelo kakhulu Hollywood.
Ayikho zincane, futhi ezinye ezingu-movie "The Notebook." Abalingisi ababedlala izinhlamvu ezincane, ijwayelekile izethameli, lokungekho ngephansi. Veterans screen Dzheyms Garner futhi Dzhina Roulends ihlanganise duo romantic uNowa Allie sebegugile. Dzheyms Marsden kudlalwa lempi Lon Hammond, okungadingi Allie kwesokunxele for lover yakhe kuphela.
ababukeli lezivakashi: ngowokuqala emhlabeni
"I-Notebook" - umkhiqizo okuthakazelisayo. Egcwele umuzwa ke nokho ibonisa indaba ngempela ukuthi kungenzeka kunoma ubani kithi. Nge melancholy wakhe evamile futhi ngokuthinta athwala uthando kweqiniso ngemva kweminyaka eminingi.
Ungaphuthelwa, awukwazi miss "The Notebook." Abalingisi, ngobuqotho okugcwele unobtrusively adlulisele yonke imizwa kanye uhlupha izinhlamvu zakhe, kwangithinta ezimnandi ngomdlandla. Kunzima futhi cishe akunakwenzeka ukuthola ukuphila okunjalo ngoba isikrini incarnation wothando oluphelele namandla kuze kube phakade sihleli e inkumbulo isibukeli.
Isithombe uthi nokuthi wonke umuntu ukulungele ukuthatha zibhekane nemiphumela yezenzo zazo. impikiswano Okuphakade phezu "kufanele", "asikwazi" futhi "kufanele kube kanje" ukungqubuzana cela umbuzo oyisisekelo: "? kabani ukuphila uhlala" Futhi ukunikeza impendulo: "sokwenza okufunayo noma-ke."
izinyembezi Abaningi babuthana bezolalela "The Notebook." Abadlali kanye izindima basuke yakhiqizwa esikrinini, khumbula isikhathi eside, futhi izinhlamvu babé emangalisayo eduze nokucacile zonke isibukeli ngabandayo.
The best idrama Soviet: incazelo emfushane
Les Nikitiuk. Biography. Indlela waduma
Isifinyezo ifilimu "woMnduze le silvery esigodini"
Manna nge cherry - emangalisayo esihlwabusayo ithenda dessert